Mootummaan Hoggantoota olaanoo dabalatee miseensotni ABO fi KFO guutummaatti akka hidhaman ajaja dabarse – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMootummaan Hoggantoota olaanoo dabalatee miseensotni ABO fi KFO guutummaatti akka hidhaman ajaja dabarse
Mootummaan Hoggantoota olaanoo dabalatee miseensotni ABO fi KFO guutummaatti akka hidhaman ajaja dabarse.
Mootummaan Dr Abiyyiin durfamu ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaan booda Hoggantoota olaanoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO sababaa tokko malee hidhee yakka ofii dalage ittiin yakkuuf olola miidiyaa qabuun hojjechaa jira.
Yeroo ammaa kanas mootummaan bulchitoota Godinaa hanga gandaatti jiraniif ajaja kenneen hojii raawwachiiftota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO dabalatee miseensotni isaanii ummata dammaqsu jedhaman guutummaatti akka hidhaman ajaja dabarsuun bulchitootni Godinaa hanga gandaatti jiranis ajaja kana fudhachuun humna waraanaa fi tikni mootummaa Mana ummataarra deemuun Mana hidhaatti guuraa jiraachuu barame.
Obbo Geetaachoo Baalchaa hogganaan dhimmoota komunikeeshinii MNO Afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin Adoolessa 17/2020 godheen namoonni hidhaman ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaan walqabatee meeqa jedhamee gaafateef hanga ammaatti 7126 gaheera jechuun dubbatanii jiru.
Akka gabaasaan SQ gahaa jiranitti hanga ammaatti namootni hidhamanii jiran Oromiyaa keessatti baay’inni isaanii 8000 ol tahuu odeeffanneerra.
Mootummaan namoota ilaalcha faallaa mootummaa tahan hidhuun maaliif barbaachise jennee bulchitoota Godinaa hanga gandaatti jiran gaafanneef akka nuuf himanitti Maqaan isaanii akka wabeeffamu Kan him feene nuuf himuun akkas jechuun yaada Wal fakkaataa nuuf Kennan” Mootummaan ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaan walqabatee gaaga’ama qaqqabeef Hoggantoota olaanoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO dabalatee hojii raawwachiiftota fi miseensota isaanii yakkuun miidiyaa of harkaa qabuun immoo olola irratti lakkisee akka ummatni balaaleffatu akkuma gochaa jiru itti fufsiisee dalaguuf karoora baafatee jira ,kana raawwachuuf immoo namoota mootummaa kana Norman hanga haala jiru tasgabbeessinuu fi ummatni hubannoo fudhatu Internet cufnee turra kanaaf dirqama keessan saffisaan hojiitti seenaa jechuun ajaja dirqama of keessaa qabdu nuuf kenneera jedhan”.
Yeroo ammaa kanas mootummaan Mana ummataarra deemuun namoota Sabboontota tahan qabee hidhaa akka jiru ragaaleen nu gahaa jiran ifa godhaa jiru.
Namoonni hedduunis hidhaa fi doorsisa kaabinoonni mootummaa irraan gahaa jiran baqachuun bakkoota adda addaatti socho’aa baqataa akka jiranis gabaasni arganne ifa godha.
Mootummaan ummata nagaa hidhee jirus hanga ammaatti namoota yeroo reeffi Hacaaluu Hundeessaa galma Aadaa Oromoo turan qabaman Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mahaammad eegdota isaa dabalatee Kan Mana murtiitti dhiyyeesseen ala hanga ammaa namoota 8000 ol qabaman Hindi Mana murtiitti osoo hin dhiyyaatiinii fi maatiin isaanii eessatti akka hidhaman akka hin beekamne Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffateera.
Ummatni Oromoo Hindi biyya keessaa fi alaa jirtanis rakkoon Amma mootummaan addatti Sabboontota Oromoo irraan gahaa jiruu fi jumulaan Oromiyaa keessatti doorsisa gahaa jiruuf sagalee tokkoon kaayyoo fi Akeekni qabsaa’ota keenyaa akka galma gahuuf qabsoo keenya gaggeessuu qabna jechuun yaadotni SQ qaqqabaa jiran dhaamsa ummataati.
Mootummaan Itoophiyaa Miseensotaa fi Hoogganoota ABO Irratti Gaggeessu Hatattamaan Akka Dhaabbatu Gaafanna ! (Ibsa ABO…
ONN: Turtii hogganoota ABO fi KFO waliin taasise!
ONN: Turtii hogganoota ABO fi KFO waliin taasise! | Waxabajjii 18, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=qNAG2X3elVU&feature=youtu.be